မြဝတီ နယ်စပ် က မြန်မာအကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းများရဲ့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လာဘ်စားမှုများလုပ်ကိုင်စားနေကြတဲ့ လုပ်ငန်း .၊
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယ အကြီးဆုံးဖြစ်သော နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရှိ အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းများ
ပြည်သူ၏ မျက်နှာကို မကြည့်ဘဲ တဘိ်ု့တည်းသာ ကြည့်နေခြင်း။
အပေါ်မှာရေးထားသော စာသားများသည် အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းများအဖို့ တော့ ရှက်ရမည့်
အစား ပန်းနှင့်ပေါက်နေသလိုပင် ဖြစ်နေပါလိမ့်မည်။
အကောက်ခွန်ဌာန၏ အမျိူးမျိူးသောလာဘ်စားမှုများသည် မည်သူ့ကိုထိခိုက်စေသနည်း။ မည်မျှ
ထိ ဆိုးကျိူးထိရောက်သနည်း…ဒီမိုမီဒီယာတွေ ဘာကြောင့်ဒီအကောက်ခွန်တွေရဲ့လာဘ်စားမှုတွေ
အဲဒါတွေကို မရှင်းမီ အခုမြ၀တီမှာ ကြည့်မကောင်းအောင် မြင်နေရသော တရားမ၀င်ပစ္စည်း
သယ်ယူမှုကို ကြည့်ပါလေ။ မြင်တတ်သူတိုင်း မြင်ပါလိမ့်မည်။
- ဂတ်စ်အိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိူးမျိူး၊
- ဆိုင်ကယ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိူးမျိူး၊
- ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းအမျိူးမျိူးများကို မယ်ဆောက်တခွင် ပြဲပြဲစင်အောင် မြ၀တီမှ
Light Track ၊Town Ace၊ Hilux များဖြင့် တင်ဆောင်ကြသည်။ သူတို့သည် မည့်သည်အခွန်မှပေးဆောင်စရာမလိုပါ။ မည့်သည့်အစစ်အဆေးကိုမှလည်း မခံ၇ပါ။
ရှင်းရှင်းလေးပါ။ သူတို့အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းများ၏ ရှိသမျှ ဒွါရခြောက်ပေါက်လုံးကို တန်ဖိုး
မရှိသော ပိုက်ဆံနှင့် ထိုးထားလေသည်။ ကားတစ်စီးစီ တစ်ခေါက်ကို ဘတ် ၃၀၀၀ ယူပြီး အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းများ အိတ် မတရားဖောင်းနေကြသည်။ ကားတစ်စီးသည် တစ်နေ့ကို
၁ ခေါက်မှ ၅ ခေါက်ဝန်းကျင် ကားနောက်ခန်း ပြည့်ကျပ်ပြီး ခေါင်းထောင်နေအောင် တရားမ
၀င်ပစ္စည်းမျိူးစုံကို သယ်သည်။ အဲဒီလို ကားပေါင်းစုံ၏ သယ်ယူသည့်အားသည် တစ်နေ့တည်း
တွင်ပင် ၁၀ ဘီးကား ၁၀ စီးစာနဲ့ ညီမျှနေလေသည်။
ကားအားလုံးနီးပါးသည် ပစ္စည်းကို ပုံစံမျိူးစုံနှင့် ချည်နှောင်ပြီးသယ်နေကြသည်။ တရားဝင်
ပစ္စည်း သယ်ယူသည့်ဟုဆိုသောကားများကို တချက်လောက် ကြည့်ကြည့်ပါ။ ဒီလို တရားဝင
်ကုန်သွယ်ခွင့်ရအောင် နေပြည်တော်ရုံးအဆင့်ဆင့်ကို လျှောက်လွာတင့်ရလေသည်။ အခွန်
ဆောင်ထားသည့် ကုမ္မဏီတစ်ခုကိုလည်း ထောင်ထားရသည်။ ပြီးမှ ပို့ကုန်ဖြစ်သော ဆန်၊
ပြောင်း၊ နှမ်း၊ ပဲမျိူးစုံ နှင့် ပရိဘောဂ အစရှိသော ပစ္စည်းများကို ပို့ရလေသည်။ ထိုပို့ကုန်ဖြစ်
ဒေါ်လာရမှ သူတင်သွင်းချင်သည့် သွင်းကုန်ကို ပစ္စည်းအမည် တိတိကျကျ ဖော်ပြ၍ နိုင်ငံတော်
က သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း အခွန်ပေးချေပြီးမှ သွင်းခွင့်ရသည်။ ထိုသွင်းကုန်သည်လည်း
လျှောက်ထားပြီး ခွင့်ပြုချက်ရမှ တင်သွင်းရခြင်း ဖြစ်သည်။
ထိုင်း - မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးတံတားပေါ်မှ ပစ္စည်းတင်သွင်းလာသည့်အခါတွင်လည်း အကောက်
ခွန်ဂိတ်တွင် ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကို လျှောက်လွာနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပါသေးသည်။
နည်းပညာခေတ်ကြီးတွင် အင်အားကြီးနိင်ငံတွေ၏ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံထဲတွင် ဈေးကွက်ကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာလေသည်။ သူတို့ဆီက အမှိုက်သည် ကိုယ့်ဆီမှ ရွေဖြစ်နေသည့်အခါ အလုံးအရင်းနှင့် ၀င်လာလေသည်။ တိုအခါတွင် ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး စီးပွားရေး ကျွန်ပြ
ုမှုကြီး ဖြစ်လာလေသည်။ တိုင်းပြည်၏ ပိုက်ဆံသည် လုံးဝတန်ဖိုးမရှိသည့် အဆင့်ကို ထိုးဆင်း
သွားသည်။ တိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်တွေ၊ တနိုင်တပိုင် ထောင်ထားသော လျှပ်စစ်စက်ရုံလေး
တွေ၊ ပလပ်စတစ် စက်ရုံလေးတွေ၊ တရွာလုံး ယက်ကန်းရက်ပြီး အသက်မွေးတဲ့ ယက်ကန်းစင်
လေးတွေ၊ ကာယ နှင့် ဥာဏအားကိုးပြီး ဆင်ထားတဲ့ ကားတွေ၊ မိတ်ကပ်၊ ပေါင်ဒါထုတ်ပြီး စား
နေတဲ မိသားစုလုပ်ငန်းလေးတွေ၊ သန်လျှက်လေး၊ ရေအိုးလေးလုပ်ပြီး ခြေတိုအောင် လိုက်ရောင်း
ပြီး အသက်မွေး၇တဲ့ ပြည်သူ သန်းပေါင်းများစွာဟာ အလုပ်လက်မဲ့တွေ ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့ဗျာ။
ဒီလိုအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ ပြည်သူတွေ သန်းနှင့်ချီအောင် ဖြစ်နေပါပြီ။ တကယ်ကို ဖြစ်ခဲ့
တဲ့ အဖြစ်လေးတစ်ခုကတော့ … “တရွာလုံး ဆိုင်ကယ်မှာထည့်တဲ့ စပရိန်လေးကိုထုတ်ပြီး အသက်မွေးနေတာကနေ ကုန်သည်က တရုတ်ကနေ ဖေါ်ဖေါ်သီသီနဲ့ အကောက်ခွန်ဌာနကို
ပိုက်ဆံပေးပြီး တန်နဲ့ချီ သွင်းလိုက်တာ ရွာလုံးကျွတ် ထမင်းအိုးကွဲသွားကြပါတယ်ဗျာ” ….
အခုဆို ကားလုပ်ငန်းတွေလည်း ရပ်ဆိုင်းလုနီးပါး ဖြစ်နေပါပြီ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ထိုင်း
ဘက်ကမ်းမှာ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် သူများနိုင်ငံ အမှိုက်ပုံကားတွေက တောင်
ဒါကြောင့် မြ၀တီရှိ အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းတွေသည် သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ဖို့ အမျှော်မှန်းကြီးမှန်း
နေလေပြီ။ အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းတွေ ကြွယ်ဝချမ်းသာဖို့အတွက် တိုင်းပြည်က လခပေးပြီး ခန့်ထားသလိုတောင် ဖြစ်နေပါပြီ။ ဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံက ထုတ်ပြန်သော
ထိုင်း - မြန်မာ ၂၀၀၉ တွင် ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၂၄ သန်း ရှိခဲ့လေ
သည်။ သို့ပေမယ့် အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းများတွေ၏ လောဘဇောတိုက်ငွေများကိုပါ ထည့်သွင်း
မယ့်သူတွေကိုမှ ဒီတာဝန်ကို ပေးရလေခြင်းဗျာ။
မဖြစ်စလောက်ဘဲနဲ့ ရလိုက်သော ပိုက်ဆံသည် မြန်မာပြည်သူအတတ်ပညာရှင်တွေ သန်းနှင့်
ချီပြီး အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်စေပါသည်။ တို့ထက်လည်း ခန့်မှန်း၍ မရနိုင်သော ဆိုးကျိူးတွေ အများကြီးဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေ ၂၀၀၉ နှစ်ကုန်ခါနီးမှ ရောက်လာသော အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ရပ်
သည် ယုတ်မာ မိုင်းရိုင်းလှသည်။ ထိုကားများသည် အရင်ကတည်းကလည်း ပြေးနေသည်။ အခု
လည်း ပြေးနေသည်။ ဒါပေမယ့် ဦးတည်ချက်ချင်း မတူတော့ချေ။ အရင် ကားများသည် မြန်မာ
ပြည်သားတွေ အဆင်ပြေစေရေးကို ဦးတည်ပေမယ့် အခုလက်ရှိကားများကတော့ လူသည်
ပဓာနမဟုတ် ပစ္စည်းသာ အဓိက ဖြစ်နေလေပြီ။ မြင်မကောင်း ရှုမကောင်းအောင် တင်ပြီး
တဖက်နိုင်ငံမှ ထွက်သော ပစ္စည်းများကို ကိုယ့်အိမ်မှ ပစ္စည်းကဲ့သို့ အခေါက်ခေါက် အခါခါ ကဲ့ယူနေပုံကတော့ဖြင့် မြ၀တီ အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းတွေ ဘယ်လောက်တောင် စည်းပျက်
ကမ်းပျက်ဖြစ်နေပြီး ပိုက်ဆံကို ငန်းငန်းတတ် လိုချုင်နေသလဲဆိုတာကတော့ ချစ်ကြည်ရေး
တံတားမှာ ကားပေါ်က အကောက်ခွန်မဲ့ တရားမ၀င် ပစ္စည်းအမြင့်သည် မြန်မာဘက်ကမ်း ချစ်ကြည်ရေးတံတားအမိုးကိုပင် ထိနေပါတကား။
(ဖေါ်ပြပေးရန် မေးလ်ဖြင့် ပေးပို့ လာသော ကိုသီလအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်)။
ဤ သတင်း အား ပြန်လည် မျှဝေ ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်းအားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, January 16, 2010 Links to this post
ဒီနေ့လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နအဖဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး အောင်ကြည်တို့တွေ့ ဆုံ .။
လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်နှင့် စစ်အစိုးရ ဆက်ဆံရေး ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်တို့
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် ယနေ့တွေ့ဆုံကြောင်း သိရှိရပါသည်.။ယနေ နေ့လယ်
တွေ့ဆုံ ကြကြောင်း သိရပါသည်။
လူထု ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးအောင်ကြည်တို့သည် ၂၀၀၇ အောက်တိုဘာ
၂၅ ရက်နေ့က စတင် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ယခုတွေ့ဆုံမှုသည် ၉ ကြိမ်ရှိပြီဖြစ်သည်။
ဒီနေ့တွေ့ဆုံမှုဟာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင်ကော်မတီကို တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းတဲ့
သတင်း ပေါ်ထွက်ခဲ့ ပြီးနောက် ပထမဆုံး တွေ့ဆုံမှု ဖြစ်ပါတယ်။လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် စစ်အစိုးရ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်တို့တွေတဲ့ ကိစ္စ သတင်းအသေးစိတ် ကိုတော့ မသိရှိသေးကြောင်း သိရှိရပါသည်.။
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ တွေ့ မြင်ခဲ့ရသော နေကြတ်မှု ဓါတ်ပုံများ။
အောက်ကပုံတွေကတော့ မြန်မာပြည်မှာ တွေ့ ရတဲ့ နေကြတ်မှုပုံတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး ဖေါ်ပြပေးလာကြသော မိတ်ဆွေများအားလုံးအား ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာမြားနတ်မောင်စကားဝိုင်းအား အထူးကျေးဇူးတက်ရှိပါတယ်။
နေကြတ်တာဟာ နအဖတွေအတွက် မကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့ယူဆနေကြတဲ့အတွက် နေကြတ်ချိန် အမှောင်ကြသွားမှာကို ကြောက်ရွံ့ စိုးရိမ်နေတဲ့ နအဖကတော့ နေပြည်တော်မှာ နေကြတ်ချိန်အတွင်း လျှပ်စစ်မီးတွေ ထွန်းထားတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်။
နေကြတ်မှုကို မြင်တွေ့ ရဖို့ရန်ကုန်မြို့ အပါအ၀င် မြို့ တွေအတော်များများမှာ လမ်းမတွေပေါ် ထွက်ကြည့်ကြသူတွေ မနည်းလှဖူးလို့ လည်း သိရှိရပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ များကို ပြန်လည် ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင်တိုးချဲ့ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(လွတ်မြောက်နယ်မြေ)၏ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်. .
NLD (LA) Statement About NLD's CEC Extension
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, January 15, 2010 Links to this post
ယနေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံး တွင် လူထု ဦးလှ နှစ် (၁၀၀) ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း..။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် စာဖတ်ဝိုင်း ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါစာဖတ်ဝိုင်းသို့ သတင်းစာဆရာကြီးဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် အပါအ၀င် အဖွဲ့ ချုပ်
ဗဟိုအလုပ်အမှု့ ဆောင် များနှင့်အတူ ဆရာအောင်ဝင့် ၊ ဆရာ မုံရွာအောင်ရှင် ၊ ဘကြီးမိုး
( ဦးမိုးသူ ) ၊ ဆရာ ဦးအောင်ကြည်ညွန့်၊ ဖျာပုံ နီလုံဦး အစရှိသည့်စာရေးဆရာကြီးများ ၊
အဖွဲ့ ချုပ် လူငယ်များ စုံညီစွာတက်ရောက် ခဲ့ကြပြီး ဆရာကြီး လူထုဦးလှ ၏ စာပေ များကို
ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည် ။ အဆိုပါ စာဖတ်ဝိုင်း အား နေ့လည် ( ၁ ) နာရီတွင်စတင်ခဲ့ကြပြီး
ညနေ (၄) နာရီ တွင်ပြီး ဆုံးခဲ့သည် ။
စာဖတ်ဝိုင်းသိုတက်ရောက်လာကြသူများအား အဖွဲ့ ချုပ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ဝင်များမှ ကော်ဖီ ၊
ကောက်ညင်း ဆီထမင်း များဖြင့် ဧည်ခံ ကျွေးမွေးခဲ့ပါသည် ။
ပေးပို့ ပေးသော သူငယ်ချင်း အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
ဒီ မြန်မာ့တပ်မတော်သမိုင်းကို တပ်မတော်သားတွေလက်ထဲရောက်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစား ပို့ ပေးကြစေလိုပါတယ်။
ထဲရောက်အောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးစား ပို့ ပေးကြစေလိုပါတယ်။
ဒိ မြန်မာ့တပ်မတော်သမိုင်းကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ “ပြည်သူသာ အမိ ပြည်သူသာ အဖ” ဆိုတာ
သိရှိကြမှာပါ။ တပ်မတော်ဟာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက်သာ ဖြစ်ရပါမယ်။ အာဏာရူးတွေရဲ့
လက်ကိုင်ဒုတ် ကြေးစားတပ် မဖြစ်သင့်ပါဖူး။
ဒီ တပ်မတော်သမိုင်းကို တပ်မတော်ကို ဖျက်ဆီးနေသူတွေဟာ အာဏာရူးဗိုလ်ချူပ်ကြီးတွေ
ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိရှိကြပါတယ်။ယနေ့ တပ်မတော်သားတွေ ပြည်သူ့ တပ်မတော်သားအဖြစ်
ရဲရဲဝန့် ၀န့် ခံယူကြပြီး အသင်တို့ ရဲ့ စစ်ပညာနဲ့တတ်ကျွမ်းမှုတွေကို အသုံးချပြီး အာဏာရူး
ဗိုလ်ချူပ်ကြီးတွေဘက်ကို သေနတ်ပြောင်း ပြန်လှည့်ကြပါ။
တွေကသောင်းသောင်းဖြဖြကြိုဆိုကြမယ့် မေတ္တာအပြည့် ၀မ်းသာပီတီနဲ့အပြည့်နဲ့ ကြည့်တဲ့
ဒီ မြန်မာ့တပ်မတော်သမိုင်းကို တပ်မတော်သားတွေလက်ထဲရောက်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစား
မြန်မာ့တပ်မတော်သမိုင်း (အပိုင်း က အား ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် - http://ifile.it/l0zasu8 )
မြန်မာ့တပ်မတော်သမိုင်း (အပိုင်း ခ အား ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် - http://ifile.it/kzp5m0x )
ပြန်လည် မျှဝေ ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
ယနေ့ နေ့စွဲဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် အဖွဲ့ကိုအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် တိုးချဲဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်း.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, January 14, 2010 Links to this post
နေကြတ်တာ အကြာဆုံး သုံးနာရီကျော်ခန့်နေကြတ်တာကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ကြည့်ရှုနိုင်မည့် နေရာဒေသများ။
မနက်ဖြန် ဇန်န၀ါရီလ (၁၅) ရက်နေ့ မှာ အကြာဆုံးဖြစ်တဲ့နေကြတ်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံက မြို့ တွေမှာ တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့ လည် (၁) နာရီခန့် ကနေ ညနေ (၄) နာရီခွဲလောက်ထိ သုံးနာရီခွဲလောက် ကြာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။နေကြတ်တာကို ထင်ထင်ရှားရှား မြင်တွေ့ နိုင်မယ့် မြို့ တွေကတော့ စစ်တွေ၊ ရွှေဘို၊ မန္တလေး၊ မေမြို့ နဲ့လားရှိုးမြို့ တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
“နေကလည်း ကြတ်၊ ဘ၀တွေလည်း ကြပ်တော့ ကြပ်ပြေးက
တပ်ချူပ်ကြီးတော့ ဘ၀အကူး ကြတ်တော့မယ်”။
သန်လျှင်မြို့ရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေကို ညှိုးနွမ်းစေအောင် ပြုလုပ်နေကြသော စီးပွားရေးသမားများနှင့် အာဏာပိုင်များ..၊
ထားတယ် ဆိုရင်တော့ ပြောစရာမလိုပါ။
၀န်ထမ်းအများစုနှင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းများရှိနေတဲ့ သန်လျှင်မြို့မှာ တည်းခိုခန်း အရေအတွက်
၃၀နီးပါး ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးထားသည်ကိုက ရယကများနှင့် မယကလူကြီးမင်းများ မည်သို့မည်ပုံ
စဉ်းစားပြီး ဖွင့်လှစ်ခွင့်လိုင်စင်ချပေးခဲ့သည်ဆိုတာကို နားမလည်နိုင်တော့ပါ။
ပေးခဲ့ပါသလဲ။ဒီဆိုးကျိုးတွေဆိုတာကတော့ ကျောင်းသားစုံတွဲအချို့သည် အလွယ်တကူသွား
တွေ၊အထက်တန်းကျောင်းသားတွေကထိုလုပ်ရပ်များကို အတုခိုးမှားစေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတည်းခိုးခန်း
အပြင်အခကြေးငွေယူပြီး ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေပါ ၀င်ထွက်သွားလာနေကြတာကို မြို့သူမြို့သား တွေက မြင်တွေ့ကြားသိနေရပါတယ်။
ကလေးများကို ထိုကဲ့သို့သောအရာတွေကိုတွေ့စေခြင်း မြင်စေခြင်းသည် နောက်ဖြစ်လာမည်မျိုးဆက်
များ အတွက် များစွာသောဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ရပ်ဝေးမှ လာရောက်ပညာသင်ကြတဲ့ အဆောင်နေကျောင်းသူများသည် မိဘထိန်းကွပ်ရာမှဝေးနေ သည့်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထိန်းသိန်းနိုင်ခြင်း၊အယုံလွယ်ခြင်းမသွားသင့်သည့်နေရာများကိုသွားခြင်း၊
သည်ဖြစ်ရပ်တွေဟာ အနာဂတ် နိုင်ငံတော်သစ်အတွက် ကောင်းတဲ့အလားအလာ မဟုတ်ပါဘူး။
အခုဆိုလျှင် ကျောင်းသားလူငယ် လူရွယ်ကြားမှာ ဟာ ခေတ်စားလာပြီး အဲဒီကနေHIV ပြန့်နံ့ကူးစက်
မှု ပိုမိုဖြင့်မားလာခဲ့တယ်။ အအေးခန်းတည်းခိုခန်းတွေဟာ ဒီလိုမဆင်မချင်(sex)ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပေါ် လာစေတဲ့အခြေအနေတွေကို တွန်းပို့ပေးနေတယ်၊ မည်သူ့တွင်တာဝန်ရှိသလဲဟုသော
ဘာကြောင့် များစွားသောတည်းခိုခန်းများဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက် လိုင်စင်ချပေးခဲ့ပါ သလဲ။
သိသိနှင့် မသိကျိုးကျွံ့ပြုနေတဲ့သန်လျှင်မြို့မှ မယကလူကြီးမင်းများကို စဉ်းစားဥာဏ်လေး
မီးတွေကလည်းပျက်မြဲအတိုင်းပျက် ပါတယ်လမ်းတွေကလည်း စုတ်မြဲအတိုင်းစုတ်ပါတယ်။၂လုံး ၃သုံး လောင်းကစားဒိုင်တွေဘောလုံးပွဲဒိုင်တွေဒီအအေးခန်းတည်းခိုးခန်းလုပ်ငန်းတွေပေါလာတာကလွဲလို့ တကယ်တိုးတက်လာတာဆိုလို့သန်လျှင်ရန်ကုန်တံတားလေးတစ်စင်းပါပဲ။သာမန်အမြင်ဖြင့်ကြည့်
မည်ဆိုရင်တော့ မြို့ဝင်ဝင်ခြင်း စတွေ့တာကတော့ တည်းခိုခန်းဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့အဆောက်အဦးများ ထည်ဝါစွာရည်တည်လျှက် ရှိတာကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သန်လျှင်မြို့ကိုမကြာခဏဆိုသလို ကျွန်မတို့ရဲ့ အစိုးရခေါင်းဆောင်များလာရောက်ကြပါတယ်။
မျက်စိမှိတ်ပြီးများလာရောက်ကြပါသလားလို့ မေးချင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဒါတွေရှိနေတာကို
စေချင်ပါတယ်.... ကျွန်မလက်လှမ်းမှီသလောက်စုံစမ်းထားတဲ့ တည်းခိုခန်းနာမည်များကိုလည်း အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်...
၅. မြူနှင်းဝေေ၀ ၁ နှင့် ၂
တပ်မ ၆၆ တွင်တပ်တွင်းပုန်ကန် မှုဖြစ်ပွား.။
တပ်မ ၆၆ မှာ တပ်တွင်းပုန်ကန်မှုတွေရှိနေပြီ။ မနေည ၈နာရီ ခန့် က အင်းမ အခြေစိုက် ခမရ ၈၀ မှာ -တပ်ရင်းမှာ စတင်ပြစ်ခတ်တယ်။ စားဝတ်နေရေးကြောင့် တပ်သားတွေ က အမိန့် ကိုမနာခံတော့တာ တနစ်ကျော်နေပြီလို့ သိရတယ်။ သူတို့ ကို ဘာတာဝန်မှ ထပ်မပေးတော့ပဲ ပြစ်ထားတာ ကြာပြီလို့ သိရတယ်။ ပြစ်ခတ်မှု ၁၀ မိနစ်ကျော်ကြာတယ်။ ၃ ယောက်ဒဏ်ရာရ ပြီး၊ တယောက် သေတယ်။
ဖြစ်ပွားပုံကတော့ ဇန်န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့ က ရန်ကုန်စစ်ဌာနချုပ်အမိန့်နဲ့ လာတဲ့ စစ်အရာရှိ ၁၄ ဦးက ပုန်ကန်နေတဲ့ ခမရ ၈၀ ကို လက်နက်လာဖြုတ်ပါတယ်။ လက်နက်လာဖြုတ်တဲ့ ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်က အရာရှိတွေကို ကို ခမရ ၈၀ တပ်ရင်းမှုက တပ်တွင်း စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းမှု၊ ရိက္ခာပြတ်လပ်မှုနဲ့တိုင်းမှုးနဲ့သူမိန်းမ ဆွေမျိုးတွေရဲ့ လပ်စားမှုအကြောင်းတွေကို တင်ပြခဲ့ ကြတယ်။ ရန်ကုန်ကလာတဲ့ အရာရှိတွေကို ခမရ ၈၀ တပ်ရင်းက ရဲဘော်တွေက သူတို့ချက်ပြုတ်စားနေရတဲ့ ထမင်းဟင်းတွေ နဲ့ ကျွေးမွေးခဲ့ကြတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးစက်ကနေ သူတို့ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး ကြတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ကျနော်တို့ နေစဉ်စားနေရတဲ့ အစားသောက်တွေကို စားကြည့်ပြီးမှာ ကျနော်တို့ တင်ပြတာတွေဟာကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါလို့ဆိုပြီး ထမင်းဝိုင်းကိုခေါ်သွားတယ်။ ဒါကို ကြပ်ပြေးကအရာရှိတွေက သူတို့ ကိုစော်ကားတယ်။ ပုန်ကန်တယ်လို့ဆိုပြီးကြိမ်းမောင်း ထိုးကြိတ်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ခမရ ၈၀ တပ်ရင်းမှုးရဲ့တောင်းဆိုမှု၊တင်ပြမှုတွေကို စစ်ဌာနချုပ်က အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိပဲ ကြပ်ပြေးက အရာရှိတွေ က ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းနေတယ်။ ခမရ ၈၀ က အရာရှိတွေကို လက်နက်ဖြုတ်ဖို့ နဲ့အရေးယူဖို့ညွန် ကြားလာတဲ့အတွက် ခမရ ၈၀ တပ်ရင်းမှုးက ကြပ်ပြေးက အရာရှိတွေကို ၈ရက်နေ့ မှာဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။ ဇန်န၀ါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ မှာတော့ နောက်ထပ်အရေးယူဖို့ ရောက်လာတဲ့ ကြပ်ပြေး က စေလွတ်လိုက်တဲ့ တပ်ဖွဲ များနဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်.။
အဘလမ်းပြခဲ့တဲ့ ........ အမွေ
အဘလမ်းညွှန်ခဲ့တဲ့ ..... အမွေ
အဘဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ..... အမွေ
အဘမျိုးစေ့ချခဲ့တဲ့ ..... အမွေ
အဘရဲ့ အမွေ ..... အားလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့အမွေ
ဒီ အမွေကို အပွန်းအပဲ့မခံနိုင်
အဘရဲ့အမွေကို တိုးပွါးအောင် လုပ်ဆောင်ရမှာ တမျိုးသားလုံးရဲ့ အလုပ်။
အဘရဲ့အမွေကို မြင့်မားလာအောင် လုပ်ဆောင်ရမှာ တမျိုးသားလုံးရဲ့ တာဝန်။
အဘရဲ့အမွေကို ဂုဏ်ရှိန်မြင့်အောင် လုပ်ဆောင်ရမှာ တမျိုးသားလုံးရဲ့ ဝတ္ထရား။
အဘရဲ့အမွေကို သမိုင်းထူနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ရမှာ တမျိုးသားလုံးရဲ့ အဓိဌာန်။
ဒီ..... အမွေကို ထိပါးစော်ကား အနိုင်ကျင့်လာရင်တော့ ဗြဟ္မစိုရ်တရား
သွေး ...... သွေးခြင်း
အသက် ....... အသက်ခြင်း
သမိုင်း ....... သမိုင်းခြင်း လဲရန်အသင့်။
အဘယ့်ကြောင့်နည်း ? ။ .... အဘရဲ့ အမွေသည် ဗုဒ္ဓရဲ့အမွေ ပင် ဖြစ်တော့သည်။
အဘရဲ့ အမွေသည် (၇)ရက်သားသမီး လူမျိုး ဘာသာ ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ ၊ မိတ်ဆွေရန်သူ မရွေး နာရေးကိစ္စ များကို အခမဲ့ကုသိုလ်ဖြစ် သဂြိုင်္လ်ပေးသော နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) တည်းဟူသော အမွေပင် ဖြစ်တော့သည်။
အသက်တစ်ရာ ပြည့်ပြီဖြစ်သော အဘ (ဘဘ ဦးသုခ) (၁၄-၁-၁၉၁၀ - ၁၄-၁-၂၀၁၀)
အဘသည် ..... ကျွန်တော်တို့၏ လူမှုရေး ..... လမ်းပြကြယ်
အဘသည် ..... ကျွန်တော်တို့၏ ဘာသာရေး ..... လမ်းပြကြယ်
အဘသည် ..... ကျွန်တော်တို့၏ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်း ..... လမ်းပြကြယ်
ဘဘ မျိုးစေ့ချပေးခဲ့သော ကမ္ဘာမြေပြင်မှ ထွက်သွားသူတွေ ကျန်ရစ်သူတွေအတွက် အပူမီးများ ငြိမ်းအေး ရန် သောက ၊ ပရိဒေဝ ၊ ဒုက္ခ ၊ ဒေါမနဿမီးများ သက်သာမှုရရှိရန် မည်သည့်အကြပ်အတည်း ရှိပါစေ စေတနာ ၊ ဝါသနာ ၊ အနစ်နာ ၊ အကြင်နာ ဆိုသည့် "နာလေးနာ" ဖြင့် ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ပေးနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
အဘပေးခဲ့တဲ့ အမွေထူး အမွေမြတ်ကို ထပ်မံတိုးပွါးစေရန် ရည်ရွယ်လျက် ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ် ကျန်ရစ်ခဲ့သော နာမကျန်းရောဂါဝေဒနာသည်များကို "ဆေးဖြင့် ရောဂါတို့ကို ဆေးကြောအံ့" ဟူသော ဆောင်ပိုဒ်အတိုင်း အခမဲ့ ကုသိုလ်ဖြစ် ကုသပေးလျှက် ရှိပါသည်။
ဤသည်ကား ... သုခ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း ဟူ၍ အမည် နာမတင် မြှောက်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ပြင် ... ကမ္ဘာမြေပြင်သို့ ရောက်ရှိကျင်လည်နေသော လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များ အတွက် ...
ဘဝရဲ့ ............... အလင်းတန်း
လူမှုရေး ........... အလင်းတန်း
ပညာရေး ......... အလင်းတန်း
စာရိတ္ထ .............. အလင်းတန်း
ကျန်းမာရေး ..... အလင်းတန်း
မျိုးချစ်စိတ် ...... အလင်းတန်း
ဗုဒ္ဓရဲ့ ................. အလင်းတန်း
စတဲ့ ..... အလင်းတန်းများရရှိတိုးပွါးလာစေရန် ရည်သန်လျက် အကျိုးရှိအကျိုးပြုစာပေများ လေ့လာ လိုက်နာ ကျင့်သုံး၍ ခံယူချက်များ မှန်ကန်စေမည့် စာပေခန်းလေးတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ရန် ရက်ပိုင်းသာ လိုတော့သည်။
(၁၃ - ၂ - ၂၀၁၀)
ဤသည်ကား ..... "သုခ အလင်းစာကြည့်ခန်း" ဟူ၍ အမည်နာမ တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။
အဘ ရောက်ရှိနေသော မြင့်မြတ်သောဘုံမှ သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ... အကြိမ်ကြိမ် ခေါ်ဆိုပါလေတော့။
အဘရဲ့ အမွေကို အသက်နှင့်လဲ၍ တိုးပွါးထိမ်းသိမ်း စောင့်ရှောက်သွားမည့် .....
ကျော်သူ နှင့် သွေးသောက်များ ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ချုပ်ဝင် မချို၊ ကိုရွှေဂျိုး၊ ကိုစိန်လှိုင် ၃ ဦးကို အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်စီ စီရင်ချက်ချ
အဖွဲ့ချုပ်ဗဟို လူမှုအထောက်အကူပြုအဖွဲ့ဝင် မချို ခေါ် မမြင့် မြင့်စန်း အပါအဝင် ၃ ဦးကို ဒီနေ့ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်စီ စီရင်ချက် ချလိုက်ပါတယ်။ လှိုင်òမိ့နယ် အဖွဲ့ချုပ်ဝင် ကိုရွှေဂျိုး၊စမ်းချောင်းကသုံးရောင်ခြယ် အဖွဲ့ဝင် ကိုစိန်လှိုင်နဲ့ မချို တို့ကို တရားမဝင်အသင်းနဲ့ ဆက်သွယ်မှုပုဒ်မ ၁၇-၁နဲ့ ပြစ်ဒဏ်ချ လိုက်တယ်လို့ ဒီအမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ ရှေ›နေဦးကျော်ဟိုးက ပြောပါ တယ်။ အင်းစိန်ထောင် အတွင်းရှိ စမ်းချောင်းမြို့နယ်တရားရုံး တရားသူကြီး ဦးတင် ဆွေလင်းက ပြစ်မှုကျုးလွန်ကြောင်း အထောက်အထား ခိုင်လုံမှုမရှိဘဲ အမိန့်ချလိုက် တယ်လို့ ဦးကျော်ဟိုးက ပြောပါတယ်။
“သူ့ရဲ့ စီရင်ချက်မှာလည်းပဲ မျက်မြင်သက်သေ ရှိတယ်ဆိုတာလည်း မပေါ် ပေါက်ဘူး။ ဒီလို ငွေပေးငွေယူ လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ စာရွက်စာတမ်း အထောက် အထား ရှိတယ်လို့လည်း မပေါ်ပေါက်ဘူး။ ဆိုလိုတာက အန်အယ်လ်ဒီ(အယ်လ် အေ)က အီဗား(ခေါ်)ဆန်းလှိုင်(ခေါ်)တင်လှိုင်ဆီမှာ ငွေလက်ခံရယူတယ် ဆိုတဲ့ စာ ရွက်စာတမ်း အထောက်အထား မျက်မြင်သက်သေလည်း မရှိဘူး။ “ဒီလို မရှိဘဲနဲ့ ဒီလိုမျိုး အပြစ်ဒဏ်ပေးတာက ဥပဒေအရဆိုရင် ကျနော် တို့က လက်မခံနိုင်ဘူး၊ ကျနော်တို့ဘက်က လုံးဝမကျေနပ်ဘူး၊ မကျေနပ်တဲ့အတွက် အယူခံတင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေပါတယ်။” ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် မတ်လအတွင်းက ဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ သူတို့ ၃ ဦးကို အခု ပြစ်ဒဏ်ချ ချိန်မှာ ချုပ်ရက်ခံစားခွင့် မရတဲ့အပေါ်လည်း အယူခံတင်သွားမယ်လို့ ဦးကျော်ဟိုးက ဆက်ပြောပါတယ်။
“၂ဝဝ၉ မတ်လထဲက ဖမ်းထားတာ၊ ချုပ်ရက် ၆ လလောက် နစ်နာနေတယ်၊ တနည်းအားဖြင့် ပြောရရင် သူတို့ကို ပြစ်ဒဏ် ၃ နှစ် ပေးပေမယ့် တကယ်တမ်း ချုပ် ရက် ၆ လက မခံစားရတဲ့အတွက် သူတို့ဟာ ၃ နှစ်ခွဲ ကျတဲ့သဘော ဖြစ်နေတာပေါ့။ “နောက်ပြီး စီရင်ထုံးတွေလည်းရှိတယ်။ ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက်က ချုပ်တယ် ဆိုတာ ချုပ်တဲ့ အရာရှိတွေကို ခေါ်မေးရမယ်၊ မေးပြီးတော့ တရားရုံးရဲ့ အမှုတွဲမှာ မှတ်တမ်းတင်ရမယ်၊ တင်ပြီးတော့ ပြစ်ဒဏ်ပေးလို့ရှိရင် ပြစ်ဒဏ်ထဲက ထုတ်နှုတ်ရ မယ် ဆိုပြီးတော့ တရားရုံး ညွှန်ကြားလွှာတွေမှာ ပါပြီးသားပါ။ အဲဒါကို တရားသူကြီးက မလိုက်နာတဲ့အတွက်ကြောင့် ချုပ်ရက်တွေ နစ်နာ နေရတယ်၊ ဒီကိစ္စအတွက်လည်း ကျနော်တို့က အယူခံ တက်ရမှာဘဲ၊ ၆ လ ချုပ်ရက် က ပျောက်နေတာပေါ့ဗျာ။” ရခိုင်ကျောင်းသားလူငယ် ၁၁ ဦး အမှုကိုလည်း အင်းစိန်ထောင်တွင်းရှိ အ နောက်ပိုင်း ခရိုင်တရားရုံးမှာ ဒီနေ့ ဆက်လက် စစ်ဆေးခဲ့ရာ တရားလိုပြသက်သေ အင်တာနက် စောင့်ကြည့်တာဝန်ခံ ဒု-ရဲအုပ် ဝင်းကျော်ကို စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ ဦး ကျော်ဟိုးက ပြောပါတယ်။ စစ်တွေမြို့က ကိုကျော်မိုး၊ကိုကျော်ဝင်းနဲ့ကိုထွန်းလင်းကျော်တို့ အပါအဝင် ကျောင်းသားလူငယ် ၁၁ ဦးကို မနှစ်က စက်တင်ဘာလအတွင်းမှာ အာဏာပိုင်တွေ က ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှု၊ တရားမဝင်အသင်းနဲ့ ဆက်သွယ်မှု စတဲ့ ပုဒ်မ တွေနဲ့ တရားစွဲထားတယ်လို့ ရှေ့နေ ဦးကျော်ဟိုးက ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့အချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင် တွင်းအကျဉ်းကျခံလျက်ရှိသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ.။
ဦးခင်ကျော်ဟန်(ရေနံချောင်း) ပြုစုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်.။
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၌ နအဖ ဆန့်ကျင်သော လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပေါ် .
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူဆယ်မြို့ရှိ အချက်အခြာ နေရာများတွင် နအဖစစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်သည့် စာသားများ ကို မှုတ်ဆေးဖြင့် ရေးထိုးသည့် လှုပ်ရှားမှုများ ၂ ရက်ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း မျက်မြင် မူဆယ်မြို့ခံ များက ဆိုသည်။
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ အလိုမရှိ ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေမုချ ကျဆုံးရမည် ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်ပေး ရေး ဒို့အရေး စသည့် စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်ရေး စာသားများကို ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်နေ့ နှင့် ၈ ရက်နေ့များက မူဆယ်မြို့၏ နေရာ ၃ ခုတွင် ရေးထိုးထားကြောင်း သိရသည်။
ဇန်န၀ါရီ ရ ရက်နေ့က အထက ၂ ကျောင်း ပညာရေးစုံညီ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ချိန်တွင် အဆိုပါကျောင်း နံရံနှင့် လမ်းများပေါ်တွင် ရေးထိုးထားကြောင်း မြို့ခံတစ်ဦးက သျှမ်းသံတော်ဆင့် သို့ပြောသည်။
နောက်တစ်ရက်တွင် လ၀က ရုံးရှေ့နှင့် ရဟတ်ယာဉ်ကွင်းရှိရာနေရာများ၌ အဆိုပါ စာသားများ အတိုင်းရေး ထိုး ထားခြင်းကို ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း သူက ဆိုသည်။
“အထက ၂ မှာ အဲဒီနေ့က ပညာရေးစုံညီပွဲတော်ရှိတယ် ၉ နာရီလောက်စတာပေါ့ မှုတ်ဆေးနဲ့ နံရံတွေ လမ်းမ ပေါ်တွေမှာ ထိုးထားတယ် မနက်ပိုင်းမှာပဲ ရဲတွေလာဖျက်သွားတယ် နောက်တစ်နေ့ကျတော့လည်း ဒီစာသားတွေပဲ လ၀က ရုံးရှေ့ရယ် လေယာဉ်ကွင်းရှေ့မှာရယ် ထပ်လုပ်ထားတာတွေ့ရတယ် ” လို့ သူက ဆက်ပြောသည်။
အထက ၂ ကျောင်း ၀န်ထမ်းတစ်ဦးက ကျောင်းရှေ့ မှုတ်ဆေးဖြင့်ရေးသားထားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း အ တည် ပြု ပြောကြားသည်။
“ကျောင်းရှေ့နံရံမှာ မှုတ်ဆေးနဲ့ရေးထားတာ ပညာရေးစုံညီပွဲမဟုတ်ဘူး ငွေချူပွဲ ဆိုပြီးရေးထားတယ် ကျန်တာ တွေတော့မတွေ့ဘူး ကျမတို့က ၇ နာရီလောက်သွားတော့ နံရံမှာရေးထားတာပဲတွေ့ရတယ် ထုံးနဲ့ ထပ်သုတ် လိုက် တယ် ” လို့ အဆိုပါ ၀န်ထမ်းက ပြောသည်။
မူဆယ်မြို့ပေါ်တွင် ယခုကဲ့သို့ အစိုးရဆန့်ကျင်စာ ရေးသားခြင်းမှာ ရှားရှားပါးပါးဖြစ်ကြောင်းနှင့် မည်သည့် အဖွဲ့ အစည်းက ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို မသိရှိကြောင်း စောစောက မြို့ခံက ပြောသည်။
လ၀ကရုံးရှေ့နှင့် ရဟတ်ယာဉ်ကွင်းရှေ့ ဆန့်ကျင်စာများရေးသားထားခြင်းကို အတည်ပြုချက် ရယူနိူင်ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, January 13, 2010 Links to this post
တိုင်းမှူးအမိန့်ဖြင့် နွေစပါးစိုက်ပျိုးနေရပြီး မစိုက်သူများငွေပေးနေရ
တိုင်းမှူးအမိန့်ကြောင့် နွေစပါး မဖြစ်မနေစိုက်ပျိုးနေရပြီး မစိုက်နိုင်သည့် လယ်သမားများ ငွေကြေးထည့်ပေးနေရကြောင်း ဒေသခံလယ်သမားတဦးက ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဟင်္သာတအပိုင် အင်္ဂပူမြို့နယ်အတွင်း လယ်သမားများအား နွေစပါးဧက တသောင်းစိုက်ခိုင်းနေပြီး မစိုက်ပျိုးနိုင်သည့် လယ်သမား ၆၄ ဦးထံမှ ငွေကျပ် သုံးထောင်ကျော်ကောက်ခံနေလျှက်ရှိသည်။
“တိုင်းမှူးရဲ့ ညွန်ကြားချက် ဧရာဝတီတိုင်း တိုင်းမှူးရဲ့ ညွန်ကြားချက်နဲ့ စိုက်ခိုင်းတာ၊ ကျောင်းကွင်းအုပ်စုရဲ့ ဥက္ကဌ ဝင်းနိုင်ရဲ့တပည့် ကျော်စွာကနေပြီးတော့ ကောက်တာ။ ရတဲ့လူဆီကလည်း ရတယ်။ မရတဲ့လူတွေဆီကလည်း မရသေးဘူး” ဟု ပြောသည်။
အင်္ဂပူမြို့နယ်အတွင်းမှ ကျောင်းကွင်း၊ မယ်ဇလီကုန်း၊ လိပ်ပေါင်ဆွဲ အုပ်စုများတွင် ကောက်ခံနေလျှက်ရှိပြီး ယခင်က အဆိုပါဒေသအတွင်း နွေစပါးစိုက်ဧက (၆,၀၀၀) သာရှိခဲ့ရာမှ ယခုနှစ်တွင် တသောင်းအထိ စိုက်ခိုင်းနေသည်ဟု ဒေသခံလယ်သမားက ဆက်ပြောသည်။
“လိပ်ပေါင်စွဲအုပ်စုကတော့ တဧကကို ၁ ထောင်တောင်းတယ်။ လိပ်ပေါင်စွဲအုပ်စုကလည်း လယ်သမား ၃၀၀ လောက်ရှိတယ်။ အကုန်တောင်းတယ်။ စိုက်တဲ့သူတွေကလည်း ကညင်ချောင်းထဲက ရေကို တင်ပြီးစိုက်နေရတာ၊ နွေစပါးစိုက်တာ စိုက်ချင်တယ် ဒါပေမယ့် မဖြစ်ထွန်းဘူး” ဟု လယ်သမားများကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲကို ဆက်လက်ပြောသည်။
နွေစပါးမစိုက်ပျိုးနိုင်သည့် ဒေသခံလယ်သမားများအနေဖြင့် အခြားစိုက်ပျိုးသူများကို ထောက်ပံ့ပေးနေရသည့်အပြင် လယ်သမားများအတွက်ထုတ်ပေးနေသည့် မြေသြဇာနှင့် ပုလဲဓါတ်မြေသြဇာများကိုလဲ အပြည့်အဝမရရှိကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“လယ်သမားကလည်း မစိုက်တာ မဟုတ်ဘူး၊ အစိုက်ပြပြီးတော့ မြေသြဇာတွေ၊ ဆီတွေ၊ ဓါတ်ဆားတွေကို ပြန်ရောင်းစားတယ်။ အဲလို လုပ်ကျတာ။ ဒါပေမယ့် အခုကျန်တဲ့ လယ်သမားတွေ ဘာကြောင့် ပေးရလည်းဆိုတော့ လယ်သိမ်းမှာ စိုလို့ ပေးရတာ။ လယ်သိမ်းမယ်လို့ သူတို့က ပြောတာကို။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ငွေ ၃ ထောင် မပံ့ပိုးလို့ မဖြစ်ဘူး။ ပေးနေရတာပေ့ါ” ဟုပြောသည်။
အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းရှိ ဒေသအတော်များများတွင် နွေးစပါးအတင်းအကြပ် စိုက်ပျိုးခိုင်းနေခြင်းကြောင့် တောင်သူများမှာ အခက်အခဲမျိုးစုံ ကြုံတွေ့နေရလျှက်ရှိသည်။
DVB တေးသံရှင်များ ၂၀၁၀ နှစ်သစ် မှာ နှုတ်ခွန်းဆက် တင်ပြမှု အစီအစဉ်..။
လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ ပါဝင် ပတ်သက်၍ ဓါးပြတိုက်မှုကို ရဲမှ တခြား ပုဒ်မများဖြင့် အမှုဖွင့်
မောင်တောမြို့တွင် အင်္ဂါနေ့ နံနက်၌ ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် ဓါးပြမှုကို မောင်တော ရဲစခန်းမှ ဓါးပြမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ပုဒ်မများဖြင့် အမူမဖွင့်ဘဲ တခြားပုဒ်မ များဖြင့်သာ အမှုဖွင့်ထားသည်ဟု ရဲသတင်း ရပ်ကွက် တစ်ခုက ပြောသည်။
၄င်းဓါးပြမှုကို မောင်တောရဲစခန်းက အမှုအမှတ် (ပ) ၈ /၂၀၁၀ ဖြင့် စာရင်းတင် အမူဖွင့် လိုက်ပြီး ဓါးပြ ဥပဒေပုဒ်မ (၃၉၅)ဖြင့် အမှုဖွင့်မည့် အစား သေကြောင်း ကြံစည်မူ ပုဒ်မ (၃၀၇)၊ တုံးသော လက်နက်ဖြင့် အပြင်းအထန် နာကျင်စေမှု ပုဒ်မ (၃၂၅) နှင့် အားပေးကူညီမှု ပုဒ်မ (၁၁၄) စသည့် ဥပဒေပုဒ်မများဖြင့်သာ အမှုဖွင့်ထားသည်ဟု အဆိုပါ သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ဓါးပြမူကို ဓါးပြမူဖြင့် အမူမဖွင့်ခြင်းမှာ အဆိုပါ ဓါးပြတိုက်မူတွင် စစ်အစိုးရ လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင် တချို့ ပါဝင် ပတ်သက်နေ၍ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ဓါးပြ တိုက်ခံရပြီး သေနတ်ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သူ မောင်မောင်ကျော် ကိုယ်တိုင် ယခုအခါ ဆေးရုံတွင် ရောက်ရှိနေသော်လည်း ဓါးပြမူဖြင့် အမူမဖွင့်ခြင်းမှာ အထက်အာဏာပိုင်များက ရဲတပ်ဖွဲ့အား ဖိအားပေးထား၍ ဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါ ရဲသတင်းရပ်ကွက် ပြောသည်။
ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့သူ မောင်မောင်ကျော်အား ခွဲစိတ် ကုသရန်အတွက် ယနေ့တွင် စစ်တွေသို့ ပို့ဆောင်ရမည်ဟုလည်း သိရသည်။
ဓါးပြမှုမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဥပဒေကြောင်းအရ အမှုကြီးဆယ်ခုထဲတွင် တစ်ခု အပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး လုံခြုံရေး အများဆုံးချထားသည့် မောင်တောမြို့ပေါ်တွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် အတွက် နစကနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တွင် တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ် သဖြင့် အထက် အရာရှိများမှ အရေးယူ အပြစ်ပေးမည်ကို စိုးရိမ်ခြင်းကြောင့် ယခုကဲ့သို့ လျော့ပေါ့ အမှုဖွင့် လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု အမည်မဖေါ်လိုသည့် ဥပဒေ အရာရှိ တဦးကလည်း နိရဉ္စရာကို အောက်ပါအတိုင်း ပြောသည်။
"ဓါးပြမှုဆိုတာ အမှုကြီး ဆယ်ခုထဲမှာ တစ်ခု အပါအ၀င်ပဲလေ။ မြို့ပေါ်မှာ လာဖြစ်တာ ဆိုတော့ နစကတွေမှာရော ရဲတွေမှာပါ တာဝန်ရှိတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီလောက်လုံခြုံရေး တင်းကျပ်ထားတဲ့ မြို့ပေါ်မှာ ဓါးပြမူ လာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ အထက်လူကြီးတွေက အရေးယူ အပြစ်ပေးမှာကို စိုးရိမ်ပြီး အမူကြီးကို အမူသေးအောင် မောင်တော အာဏာပိုင်တွေက ပူးပေါင်း စီစဉ် ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။"
သေနတ်နှင့် ဓါးများ ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ဓါးပြ (၈)ဦးခန့်သည် ဗမာ စကားပီပီသသ ပြောကာ ဧည့်စာရင်းလာစစ်သည့် နစက တပ်ဖွဲ့ဝင်များကဲ့သို့ အယောင်ဆောင်ပြီး မောင်တော အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်ရှိ ဒေါ်လှရွှေ၏နေအိမ်အား အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၁ နာရီကျော် အချိန်တွင် ၀င်ရောက်ဓါးပြ တိုက်သွားခဲ့သည်။
ဓါးပြမှန်းသိ၍ မိသားစုဝင် တစ်ဦးမှ အော်ဟစ် အကူအညီတောင်းရာတွင် သေနတ်ကိုင် ဆောင်လာသည့် ဓါးပြတစ်ဦးက ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဒေါ်လှရွှေ၏ ဆွေမျိုး တော်စပ်သူ မောင်မောင်ကျော်၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ကျည်ထိမှန်ခဲ့ပြီး၊ အခြားဓါးပြတစ်ဦး၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဒေါ်လှရွှေမှာ ဦးခေါင်း ကွဲသွားခဲ့သည်။
မူဆယ်မြို့တွင် အမှုလိုက် ရှေ့နေ ဌားရမ်းခ ကျပ်သိန်း ၂၄၀ လိမ်လည်မှု စတင်စစ်ဆေး
သျှမ်းပြည် (မြောက်ပိုင်း) မူဆယ်မြို့နယ် အထက်တန်းရှေ့နေ ရွှေလီမောင်မောင် (ခ) ဦးတင်ထွန်းသည်အမှုသည် ထံမှ ကျပ်သိန်း ၂၄၀ လိမ်ယူခဲ့သည့် တိုင်ကြားချက်ကို မူဆယ် ခရိုင်တရားရုံး၌ ဇန်န၀ါရီလဆန်းပိုင်းက စတင် စစ်ဆေး နေကြောင်း သိရသည်။
ရှေ့နေ ဦးတင်ထွန်းသည် မူဆယ်မြို့ စာပေနှင့်စာနယ်ဇင်း အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်ပြီး ဟိုမွန်ရပ်ကွက်ရှိ စာနယ်ဇင်း ရုံးတွင် နေထိုင်သူဖြစ်သည်။
အမှုဖြစ်စဉ်မှာ မူဆယ်မြို့ရှိ ဈေးအသိုင်းအ၀ိုင်းနှင့် ၀န်ထမ်းများ ထည့်ဝင်သော သိန်း ၁၀၀၀ ခန့် လည်ပတ် နေ သည့် စုကြေးငွေလုပ်ငန်းကို ဒိုင်ကိုင်သူ နန်းခမ်းဦးမှ ငွေထည့်သူများကို ပြန်မပေးနိူင်တော့သဖြင့် တရားစွဲခံရ မည့် အနေအထားတွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လပိုင်းက ဦးတင်ထွန်းအား ရှေ့နေ ငှားရာမှ စတင်ခဲ့သည်။
ရှေ့နေငှားချိန်တွင် နန်းခမ်းဦး ဗင်ကားတစ်စီး ရောင်းချငွေ ကျပ်သိန်း ၂၄၀ ထဲမှ အမှုလိုက်ခ ကျပ် သိန်း ၄၀ နှင့်ကျန် သိန်း ၂၀၀ ကို စုကြေးငွေပေးရန် ကျန်နေသူများကို ဖြေရှင်းမည်ဟုဆိုကာ ဦးတင်ထွန်းက ငွေများကို ယူထားခဲ့သည်။
ငွေယူပြီးနောက် ဦးတင်ထွန်းက နန်းခမ်းဦးအား ရှောင်တိမ်းစေခဲ့ပြီး ပြသနာကို ယနေ့အထိ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း မရှိသည့်အပြင် စုကြေးရရန်ကျန်ရှိသည့် အမျိုးသမီးများကို ငွေဖြင့်မြူဆွယ်၍ အပျော်ကြံနေကြောင်း စသည့်အချက်များ ကို သူမက ၂၀၀၉ နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ တွင် လားရှိုးတိုင်းမှူးနှင့် တရားရုံးချုပ် (နေပြည်တော်) သို့ စာရေးသား တိုင်ကြား ထားသည်။
ထို့အပြင် ဦးတင်ထွန်း ရှောင်တိမ်းခိုင်းသဖြင့် ယခု သူမ တရားခံပြေးဖြစ်ခဲ့ရကာ လူမှုဒုက္ခများ ခံစားနေရကြောင်း အဆိုပါ တိုင်စာတွင် ဆိုထားသည်။
ယခုတိုင်ကြားစာနှင့်ပတ်သက်၍ မှန်ကန်ခြင်းရှိမရှိကို စုကြေးငွေရရန်ကျန်သူများအား သက်သေအဖြစ် မူဆယ် ခရိုင် တရားရုံး မှ ဥပဒေအရာရှိ ဦးခွန်ဆိုင်းရီက ခေါ်ယူ စစ်ဆေးနေကြောင်း အမှုသည် အသိုင်းအ၀ိုင်း က သျှမ်းသံတော် ဆင့် သို့ ပြောသည်။
စုကြေးငွေ ထည့်ဝင်သူ ၂၀ ဦးခန့်ရှိပြီး အဆိုပါ ထည့်ဝင်သူများကလည်း လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ဦးတင်ထွန်းငွေ ယူထားကာ ဖြေရှင်းပေးခြင်းမရှိကြောင်း တိုင်ကြားထားခြင်းဖြစ်သည်။
“ဇန်န၀ါရီလဆန်းလောက်က စစစ်ဆေးတာပေါ့ နန်းခမ်းဦးရဲ့ ယောက်ကျား အပါအ၀င် ဈေးသူဈေးသားတွေ ကျောင်း ဆရာ ဆရာမတွေ ရယကတွေ စုကြေးငွေ ကိစ္စမှာပါတဲ့သူတွေကို တစ်ရက်ကို ၃ယောက် ၅ ယောက် အဲ လို စစ်နေတယ်”
“ တိုင်ထားတဲ့အထဲမှာပါတဲ့ ကားရောင်းလိုက်တာ မှန်သလား ရှေ့နေကို သိန်း ၂၀၀ ပေးထားတာ မှန်သလား သူ ရဲ့အိမ်မှာ တရားရုံးသဖွယ်ဆောင်ရွက်နေတာ မှန်သလား အဲဒါတွေစစ်တယ် ဖြေတဲ့သူတွေကတော့ မှန်ပါတယ်လို့
ဖြေကြတယ် ” လို့ ၄င်းအမှုစစ်ခံရသူအထဲမှ တစ်ဦးက ပြောသည်။
မူဆယ်ခရိုင် တရားရုံးက တိုင်ကြားထားသည့် တရားလိုများကို သက်သေအဖြစ် ခေါ်ယူစစ်ဆေး ခြင်းဖြစ်ပြီး တိုင်ကြား ခံရသူ ရှေ့နေ ဦးတင်ထွန်းမှာ ယခုအခါ တိမ်းရှောင်နေကြောင်း သိရသည်။
ယခုအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကာယကံရှင် ဦးတင်ထွန်း၏ ဖုန်း ၁၅၁၈၄၉၃၄၈၄၉ အား ခေါ်ဆိုခဲ့သော်လည်း အဆက် အသွယ်မရရှိခဲ့ပါ။
“ရှေ့နေကိုငွေပေးတုန်းက သူက သိန်း ၄၀ ကို ရှေ့နေခပေးရမယ်ပေါ့ ကျန်တဲ့ သိန်း ၂၀၀ ကိုတော့ သူ ဖြေရှင်း ပေးမယ်ပေါ့ စုကြေးရတဲ့သူတွေကို ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းပေးပြီး ကျေနပ်အောင်လုပ်ပေးမယ် ဆိုပြီး နန်းခမ်းဦး ကိုပြေး ခိုင်းတာ ” လို့ နန်းခမ်းဦးနှင့်နီးစပ်သူက ပြောသည်။
“တကယ်ဆိုရင် ဥပဒေလည်း နားမလည်လို့ပါ ရှေ့နေငှားရင် ထုံးစံက ၃ ချိုး၁ ချိုးပေါ့ဗျာ အမှုပြီးတဲ့အထိ ပေးရတာ နန်းခမ်းဦး သူကိုယ်တိုင် အဲဒီသိန်း ၂၄၀ နဲ့ဖြေရှင်းရင်ရတာပေါ့ဗျာ အယောက် ၂၀ ကို တစ်ဦး ၁၀ သိန်းနဲ့ အရင် ပေး ထားပြီး ကျန်တာ ဖြည်းဖြည်းခြင်းဆပ်ရင် လက်ခံမှာပဲ အခု ရှေ့နေငှားမှ ထောင်လုံးလုံး ကျ ဆိုတာမျိုးပေါ့ ” လို့ သူက ပြောသည်။
၎င်းစုကြေးလုပ်ငန်း၌ ငွေထည့်ဝင်သူများသည် တစ်လကို ၃ သိန်းထည့်ဝင်ရကာ တစ်လ သိန်း ၆၀ ထုတ်ယူရပြီး စီးပွားရေးပျက်ကပ်ကြောင့် ငွေထုတ်သူများ ပြန်လည်ထည့်ဝင်ခြင်း မရှိတော့သဖြင့် လုပ်ငန်းပျက်စီးရကြောင်း သိရသည်။
နေကြာပန်းနဲ့မြန်မာပြည်သူ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဓါတ်ပုံများ။
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရရှိရေး လှုပ်ရှားမှုအား ထောက်ခံသောအားဖြင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ၌ နေကြာပန်းများ စိုက်ပျိုး၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
နေကြာပန်းဟာ သက်တမ်းကြာမြင့်စွာ လန်းဆန်းတဲ့ပန်းဖြစ်သလို ငြိမ်ချမ်းရေးသင်္ကေတ
ပန်းတစ်မျိုးအဖြစ်လည်း အသွင်ဆောင်ပါတယ်။ နေကြာပန်းကို နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံအသီးသီး
မှာ အတော်များများ စိုက်ပျိုးကြ ပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူ များရဲ့လူထု ခေါင်းဆောင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလည်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ကမ္ဘာ့ပြည်သူ တော်တော်များများက
မြန်မာပြည်သူများ အာဏာရှင်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ထောက်ခံအားပေးတဲ့အနေနဲ့ မြန်မာပြည်တွင်းမှာရော ပြည်ပ
မှာရောမိမိတို့ အိမ်ခြံဝင်းများအတွင်းမှာ နေကြာပန်းများ စိုက်ပျိုးပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
၏ ဓါတ်ပုံများ ချိတ်ဆွဲကြပေးဖို့ (သို့ ) ပြည်တွင်းမှသူများ မိမိအိမ်ခြံဝန်းအတွင်းမှာ ပြုလုပ်ရန်
အခက်အခဲရှိပါက နေကြာပန်းပွင့်များရှိရာ နေရာများမှာ ပြုလုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှုကို ဆောင်ရွက်အကောင်အထည်ဖေါ်ရင်းနဲ့ နအဖက အကြံအဖန်ပြုမယ့်
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအချိန်ကာလ ဒီနှစ်မှာ မြန်မာပြည်သူတစ်ရပ်လုံးက ရွေးချယ်တင်မြှောက်
ပေးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင် လူထုအသိအမှတ်ပြုခေါင်းဆောင်ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဖြစ်တယ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်တွင်းရော ကမ္ဘာ့ပြည်သူများကပါ မမေ့မလျော့ သိရှိစေရန်
ဒီလှုပ်ရှားမှုကို အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်မှုအား http://sunflowerforsuu.com/ မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
မတရား အဖမ်းဆီးခံ မွန်ရဟန်းပျို တပါးအား ရန်ကုန်မြို့ သို့ ဆက်လက်ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်း.။
မွန်ရဟန်းပျိုတစ်ပါးဖြစ်သည့် အသျှင်အဇ္ဇခေါ် ဦးဇင်းဇော်လတ်အား လွန်ခဲ့ သည့် ဇန်နဝါရီလ (၇)ရက်နေ့တွင် မြန်မာစစ်ထောက်လှမ်းရေးနှင့်ရဲများ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ယမန်နေ့က ရန်ကုန်မြို့အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ စစ်ကြောရေးစခန်းတစ်ခုခုသို့ ရောက်ရှိနေသည်ဟု ယူဆရကြောင်း ထိုင်းနယ်စပ်သို့ ရောက်ရှိလာသော မွန်ရဟန်းပျိုတစ်ပါးက ပြောပါသည်။
“မနေ့က မော်လမြိုင်ကနေ ရန်ကုန်ကို ခေါ်သွားတယ်၊ လူဝတ်လဲလိုက်ပြီလို့ သိရတယ်၊ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ကြောင့်တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေလက်ထဲ ရောက်နေတဲ့ သူ့ကွန်ပျူတာမှာလည်း အရေးကြီး တဲ့မှတ်တမ်းတွေ ရှိနေတယ်”
အဆိုပါမွန်ရဟန်းတော်၏ အဆိုအရ ဦးဇင်းဇော်လတ်သည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်သစ်ကူးညတွင် မွန်ပြည်နယ်ဒေသ အချို့၌ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု ယူဆပြောဆိုပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့် နှစ်သစ်ကူးညတွင် မော်လမြိုင်၊ မုဒုံ၊ သံဖြူဇရပ်၊ ရေး၊ ကျိုက္ခမီစသည့်မြို့များရှိ မော်တော်ကားလမ်းမ များပေါ်တွင် နေရာ (၉)ခုထက်မနည်း No 2010 ကြက်ခြေခတ်အမှတ်အသား စပရေးဆေးဗူးများဖြင့် ရေးသားလှုပ် ရှားခဲ့မှုကို ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်းဌာနများ၌ ဓါတ်ပုံနှင့်တကွ ဖေါ်ပြခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိနိုင်သည်။
သံဖြူဇရပ်မြို့၊ ကြံ့ခိုင်ရေးရပ်ကွက်ရှိ ကျုံ ကရုတ်ရွာအထွက်လမ်းမတွင် ရဲနှင့်ထောက်လှမ်းရေးများ စောင့်ဆိုင်းဖမ်း ဆီးနေစဉ် လိုက်ပါစီးနင်းလာသော မော်တော်ဆိုင်ကယ်မှ ဦးဇင်းဇော်လတ် ပြေးဆင်းကာ အသိအိမ်တစ်အိမ်သို့ တက်ရောက်ခိုလှုံစဉ် ဖမ်းဆီးမိခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဖမ်းဆီးခံရစဉ်တွင် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယို၊ ဓါတ်ပုံကင်မရာတွေအပြင် ခရီးဆောင်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလည်း ပါဝင်ခဲ့ သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့အပြင် နောက်တစ်နေ့တွင် ဦးဇင်းဇော်လတ် သီတင်းသုံးရာ မုဒုံမြို့နယ်၊ နိုင်လှုံရွာရှိ အောင်ဇေယျကျောင်းတိုက်၌ ကွန်ပျူတာဆက်စပ်အပိုပစ္စည်းများကိုလည်း အာဏာပိုင်တို့ လာရောက်သိမ်းဆည်း ခဲ့ပြန်သည်။ သူသည် အဆိုပါမွန်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်တွင် စာချဆရာတော်ငယ် တစ်ပါးဟု သိရသည်။
ဖမ်းဆီးခံနေရစဉ် ပထမနေ့၌ သံဖြူဇရပ်မြို့ စရဖရုံးမှစစ်ကြောရေးများပြုလုပ်ခဲ့ရာ နောက်တစ်ရက်တွင် ဦးဇင်း ဇော်လတ်သည် မေ့မျောဝေဒနာခံစားရပြီး မော်လမြိုင်ဆေးရုံ၌ အတွင်းလူနာအဖြစ် သီးသန့်ဆောင်တစ်ခုတွင် ကုသခံခဲ့ရသည်။
ဦးဇင်းဇော်လတ်သည် မွန်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုလှုပ်ရှားရေးများတွင် ဗီဒီယိုကင်မရာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်သူတစ်ဦး ဖြစ်ကာ မွန်လူငယ်အသိုင်းအဝိုင်းတွင် လူသိများသူဖြစ်သည်။
အသက် (၂၈) နှစ်ခန့်ရှိ အသျှင်အဇ္ဇခေါ် ဦးဇင်းဇော်လတ်ဇာတိမှာ မွန်ပြည်နယ်၊ ဘီလူးကျွန်းချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မုဒွန်းရွာဖြစ်သည်။ မွေးချင်းမောင်နှမများအနက် သားအကြီးဆုံးဖြစ်၍ မိခင်မှာလည်းကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး ဖခင်မှာ စိတ်ဝေဒနာသည် တစ်ဦးဖြစ်နေသည်။
စုံစမ်းမေးမြန်းချက်များအရ ဆွေမျိုးညာတိများနှင့် ကင်းကွာနေသည့်အတွက် ဦးဇင်းဇော်လတ် အမှုကိစ္စကို နောက် မှလိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးနေသူ ရှိမရှိကိုမည်သူမှမသိ ဖြစ်နေကြရသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, January 12, 2010 Links to this post
(မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး) ကြေညာချက်
Statement No. 1-2010 of ABMA
စစ်အာဏာရှင်ကြီးတွေရဲ့ အနာဂတ် ..။
မြန်မာပြည်မှာ စစ်တပ် အာဏာကို ချုပ်ကိုင်ခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ ဆိုကြပါစို့။ နောက်ဆုံး ၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုအပြီး စစ်အာဏာရှာရယ်လို့ ပြောင်ကျကျ အုပ်ချုပ်ခဲ့တာက နှစ် ၂၀ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ဒီနှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော်ကာလမှာ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ပြုတ်ကျမသွားသည့်တိုင် သေချာတာကတော့ လူထုရဲ့ ထောက်ခံမှု အစစ်အမှန်ကို မရခဲ့ကြတာပါပဲ။ ၁၉၈၈ ခု လူထုအုံကြွမှုတွေ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလ (၉ - ၈ - ၈၈) နေ့ စစ်တပ်က ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကို အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက် မြန်မာပြည်မှာ တပ်မတော် ဂုဏ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ နေ့တွေကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မရောက်နိုင်တော့ပါဘူး။ ၂၀၀၇ ခု ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးမှာ မေတ္တာပို့ လမ်းလျှောက်ကြတဲ့ သံဃာတော်မထေရ်မြတ်တွေကို ပစ်ခတ်ခဲ့တာ၊ ရဟန်းသံဃာတော်တွေ သီတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့ ကျောင်းတိုက်ပေါင်း လေးဆယ်ကျော်ကို စစ်စခန်းဝင်စီးသလို စီးနင်းဝင်ရောက်ပြီးချိန်မှာတော့ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ စစ်တပ်ပေါ် ထားရှိတဲ့ သဘောထားဟာ အတော်လေးကို စက်ဆုတ်တဲ့ အနေအထားကို ရောက်ရှိသွားခဲ့တာ လူတိုင်းအသိပါ။ ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာ စစ်တပ်ရဲ့ ဒီလိုကြမ်းတမ်းတဲ့ အပြုအမူတွေရဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ လူထုထဲမှာ စစ်တပ်ရဲ့ ရေပမ်းစားမှု၊ လူထုထောက်ခံမှုဟာ သုညအောက်ရေခဲမှတ်ကို ကျရောက်သွားပြီ ဆိုတာပါပဲ။
၁၉၈၈ ခုနှစ် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက် စစ်တပ်ရဲ့ ဘီလူးရုပ်ကို ဗိုလ်ခင်ညွန့်ဟာ မင်းသားခေါင်းဆောင်းပြီး ဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့ အမျိုးမျိုး ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အာဏာရှင် ဦးနေဝင်းရဲ့ လက်ကျဖြစ်လို့လဲ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ချင်ရင် အနည်းဆုံး တိုင်းသူပြည်သားရဲ့ ထောက်ခံမှုကို လိုအပ်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပုံ ပေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗိုလ်ခင်ညွန့်ဟာ စစ်တပ်ကို ရှေ့တန်းက ကာကွယ်ပြီး လူထုဆီက အစစ်အမှန်ထောက်ခံမှု မရရင်တောင် အတုအယောင် ထောက်ခံမှုတွေရဖို့ လူထုနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်နေဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။
လက်ရှိ စစ်တပ်ကို ဦးဆောင်နေသူ ဗိုလ်သန်းရွှေကတော့ ၁၉၆၂ ခုနှစ်ကတည်းက ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေထဲမှာ အညံ့တကာ့ အညံ့ဆုံး စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ သူဟာ နိုင်ငံရေးသဘောတရားမပါ စစ်ရေးသက်သက်ကို အတော်အားကိုးပုံရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ထုံထုံထိုင်းထိုင်း ကြမ်းတမ်းတဲ့ ရုပ်သွင်နဲ့ လိုက်ဖက်လှစွာ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ပုံတွေကလည်း ရက်စက်ခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းခြင်းများနဲ့ ပြည့်စုံလှတာမို့ သူကို ရုပ်ကြမ်း စိတ်ကြမ်း အာဏာရှင်တယောက်အဖြစ် နိုင်ငံတကာကပါ စိတ်ဝင်စားခံရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို သူ့အနေနဲ့ အောင်မြင်မှုလို့ ယူဆကောင်းယူဆမှာဖြစ်ပေမဲ့ တကယ်တော့ သူရဲ့ နိုင်ငံအုပ်ချုပ်ပုံဟာ မြန်မာပြည်မှာ စစ်တပ်က အာဏာယူနိုင်မှုကို အဆုံးသတ်သွားစေမဲ့ အုပ်ချုပ်ပုံသာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေမှာ စစ်တပ်ရဲ့ အခြေအနေဟာ အကောင်းဘက်မှာ မရှိပါဘူး။ ၁၉၈၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း လူထုထောက်ခံမှု ကျဆင်းခဲ့ရတဲ့ စစ်တပ်ထဲကို လူထုထဲက အခြေခံတပ်သားအဖြစ် ဝင်ရောက်သူ လုံးဝနီးပါး မရှိတော့လို့ နောက်ပိုင်းမှာ စစ်တပ်ဟာ တြိဂံကြီးပက်လက်လှန်ထားတဲ့ အခြေခံစစ်သားက နဲနဲ၊ ဗိုလ်တွေက များများဖြစ်နေလို့ ဗိုလ်တရာ ငယ်သားတစ် တပ်ဟာ မြန်မာ နအဖစစ်တပ်ပါ။ ရှိတဲ့ တပ်သားတစ်ကလည်း ကလေးစစ်သား၊ ဒါမှမဟုတ် တပ်ပြေးဆိုရင်လည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ ယခင်က တရင်းတရင်းမှာ တပ်သားဦးရေ ၇၀၀ မှ ၈၀၀ အထိ ရှိခဲ့တဲ့ မြန်မာစစ်တပ် တပ်ရင်းတရင်းဟာ ယခုဆိုရင် တပ်သားဦးရေ ၂၀၀ ကျော်ကျော် ၃၀၀ တောင်မပြည့်တော့လို့ ကလေးစစ်သားရရှိရေးကို အဓိကအားထားပြီး စစ်သားစုဆောင်း နေရပါတယ်။ ဒီအချက်ကလည်း နိုင်ငံတကာအလုပ်သမားဥပဒေနဲ့ ငြိစွန်းနေလို့ ILO လို အဖွဲ့အစည်းတွေက ထောက်ပြဝေဖန်လာတဲ့အခါ စစ်တပ်ဟာ စစ်သားရရှိဖို့ ဝယ်ယူနေရတဲ့ အနေအထားပါ။ ဝယ်ယူထားရတဲ့ ကလေးစစ်သားဘဝက ဇွတ်တရွတ်ဆွဲခေါ်ထားရတဲ့ စစ်သားဆိုတာ စစ်တပ်အတွက် စစ်သားကောင်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ယခုအချိန်မှာ စစ်တပ်ထဲက တပွင့် နှစ်ပွင့် သုံးပွင့် ဗိုလ်ကလေး၊ ဗိုလ်ကြီးတွေရဲ့ အလုပ်ဟာ စစ်သားသစ်ရရှိရေးမှတပါး အခြားမရှိပါဘူး။ ဗိုလ်တယောက်က တလကို စစ်သားသစ် ၃ ယောက် စုဆောင်းပေးရပါတယ်။ မရတဲ့အခါ ဝယ်ယူပေးရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
စစ်သားသစ်တယောက်ရဲ့ ဈေးနှုန်းဟာ ယခင်က ကျပ်ငွေ သုံးသောင်းမှ ငါးသောင်းဖြစ်ပေမဲ့ ယခု ၂၀၀၉ ခုနှစ်ထဲမှာ တယောက်ကို တသိန်းပေါက်ဈေး ဖြစ်နေပါပြီ။ စစ်သားဝယ်ယူမှု ကုန်ကျစရိတ်ကို စစ်ဗိုလ်ကလေးများဟာ မိမိအိပ်ထဲက စိုက်ထုတ်ဝယ်ယူပေးရတာမို့ ယခုဆိုရင် စစ်ဗိုလ်ကလေးများအတွက် သူတို့ရဲ့ ဝင်ငွေလစာနဲ့ မလောက်ငလို့ မိဘများထံ ပြန်တောင်းနေရတဲ့ အခြေအနေပါ။ ဒါကြောင့် မြန်မာပြည်ထဲမှာ သားစစ်ဗိုလ်တယောက်ရှိရင် အိမ်က မိဘ ထမင်းငတ်မဲ့ကိန်း ဆိုက်နေလို့ စစ်ဗိုလ်ကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေဟာ သားအရာရှိဖြစ်လို့ ဝမ်သာရမှာလား။ အိမ်ကရှိသမျှလေး ခြစ်ချုပ်ပြီး သားအလုပ်မပြုတ်ရေး စစ်သားဝယ်ကြေး ထောက်ပံ့နေရလို့ ငိုရမှာလားနဲ့ ငို၍ ရီ၍ မရသော မျက်နှာပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်နေပါပြီ။
ဒါ့အပြင် မြန်မာပြည်သူလူထုထဲမှာ ကြေးပိုင်ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ် မထွန်းကားပေမဲ့ စစ်တပ်ထဲမှာ ထွန်းကားနေတဲ့ ကြေးပိုင် ကျွန်ပိုင်စနစ်ကလည်း အောက်ခြေအရာရှိ အရာခံ အကြပ်တပ်သားတွေအဖို့ ကြီးလေးတဲ့ ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုး ဖြစ်နေကြပါပြီ။ သာမာန်အဆင့် စစ်ဗိုလ်ကလေးတွေရဲ့ အလုပ်ဟာ တပ်ရင်းမှူး၊ တပ်မမှူး၊ ဗျူဟာမှူးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ကတော်တွေ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စအဝဝကို ဆောင်ရွက်ပေးရတာဟာ တာဝန်တွေထဲက တာဝန်ပါပဲ။ တခါ တပ်ရင်းမှူး၊ တပ်မမှူး၊ ဗျူဟာမှူးတွေ ကျပြန်တော့လည်း သူ့ထက်မြင့်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့ တောက်တိုမယ်ရ အငေါက်ခံ အဆူခံ အခြေအနေဆိုးနေသလဲဆိုရင် စစ်တိုင်းတတိုင်းရဲ့ တိုင်းမှူးဆိုတာ နေပြည်တော် ကြပ်ပြေး (ခေါ်) အလွန်ဆိုးတဲ့ ဆိုးမြို့တော်ကို ရောက်ရင် တပ်သားအဆင့်ပဲ ရှိတော့တယ်လို့တောင် လူတွေက ပြောနေကြပါပြီ။ နေပြည်တော်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ရာထူးအရေးမကြီး၊ နေရာသာအဓိကလို့ ဆိုကြပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်ကြီးများရဲ့ လက်သင့်ရာ စားတော်ခေါ် ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဗိုလ်မှူး ဗိုလ်ကြီးလောက်ကို စစ်တိုင်းတွေကလလာတဲ့ ဗိုလ်မှူးချုပ်၊ ဗိုလ်ချုပ်တွေက ကြောက်နေရတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒီလို ကြေးပိုင်ကျွန်ပိုင်စနစ်ဆန်ဆန် စစ်တပ်ရဲ့ အထက်အောက် ဆက်ဆံရေး ရှုပ်ထွေးမှုတွေက စစ်တပ်ကို ပြည်သူလူထုက နှစ်သက်ဖို့ မပြောနဲ့။ စစ်တပ်ကို စစ်တပ်က နှစ်သက်ဖို့ မလွယ်တော့တာ သေချာပါတယ်။ အထက်ကပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေရဲ့ သက်သေကို ရှာချင်ရင် မင်္ဂလာဒုံ စစ်ဆေးရုံက စစ်တပ်က စိတ်ဖောက်သွားတဲ့သူတွေ ထားတဲ့ နေရာကို သွားရောက်လေ့လာကြည့်ပါ။ ခြံခတ်ထားတဲ့ စိတ္တဇဝေဒနာသည် စစ်ဗိုလ်တွေကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
ရှေ့လျှောက်လည်း စစ်စိတ္တဇဆေးရုံမှာ စစ်တပ်က လူတွေ တိုးရောက်လာဖို့သာ ရှိပါတယ်။ လျှော့သွားဖို့ လမ်းမမြင်ပါဘူး။ တနှစ် တနှစ်တိုးလာတဲ့ စစ်ဗိုလ်အရေအတွက်က ထောင်ဂဏန်း၊ နှစ်အလိုက် သက်တန်းပြည့်တိုင်း ရာထူးတိုးပေးရတဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာကြောင့်လည်း စစ်တပ်ထိပ်ပိုင်းမှာ ဧရာမ ဗိုလ်ချုပ်၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုတဲ့ ဗိုလ်ထုပ်ကြီးဟာ တပြုံတမကြီး ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီအထဲမှာ တသက်လုံး စစ်တပ်မပြိုကွဲဖို့ ငါတို့အမြဲလိုနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေတို့၊ ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးတို့က မသေမချင်း စစ်တပ်က မထွက်ဘဲ ပေခံနေကြမှာကတော့ စစ်တပ်အတွက် အဆိုးဆုံးပိတ်ဆို့မှုပါပဲ။ သူတို့ မထွက်နိုင်လို့ တခြားသူတွေကိုလည်း ဖြုတ်ဖို့ ခဲရင်း၊ စစ်တပ်ရဲ့ ရာထူးစီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းဟာ အဝင်သာရှိပြီး အထွက်မရှိတဲ့ ဝမ်းဗိုက်တခုလို အစာမကြေ ရင့်ပြည့်ရင်ကယ် ဆီးချုပ် ဝမ်းချုပ် စမြင်းခံနေရပြီဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခုတလော အသံထွက်လာတဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီးအောက် စစ်တပ်အောက်ခြေ အမှုထမ်းတွေကို ကျပ်ငွေ နှစ်သောင်းလစာ ဆောင်းပေးမယ်ဆိုတာ ဖြစ်လာတာပါ။ ဒါဟာ အစာမကြေနေသူတွေကို အစာကြေဆေး လျက်ဆား ကြွေးလိုက်တာပါပဲ။ ဗိုလ်သန်းရွှေအနေနဲ့ အစာကြေနိုးနိုး အစာကြေလျက်ဆား ကြွေးကြည့်သော်လည်း ပြဿနာဟာ ဒီလောက်နဲ့ ဖြေရှင်းလို့ ရနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။
တိုင်းသူပြည်သားနဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ အခွင့်အရေး အနေအထား ကွာခြားသလို စစ်တပ်အပေါ်ပိုင်းနဲ့ အောက်ခြေရဲ့ အခွင့်အရေး ကွာခြားမှုဟာလည်း တနေ့တခြား ထင်ရှားကြီးမားလာနေပြီမို့ ထိပ်ဆုံးမှာ အမာအခဲ အတုံးများအဖြစ် ပိတ်ဆို့နေသူ ထိပ်ဆုံးက စမြင်းတုံးကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအဖို့ အတိုက်အခံတို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေး ဝမ်းနှုတ်ဆေးနဲ့ ထွက်ရင်ထွက်၊ မထွက်ရင်တော့ ကိုယ့်လက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမဲ့ မရေရာ မသေချာတဲ့ အနာဂတ်သာ ရှိတော့ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဒီလို နဲ့ ...
ဒဏ်ရာ ရ ခဲ့တဲ့.
ကန္တာရ နှစ်များ နဲ့လည်း
သစ္စာ ထား ခဲ့ ပြီး
အဲဒီ လို နဲ့.....
အမှန်တရား ကို လည်း
ထမင်း စား ဖိတ်ခဲ့ ပြီ
နေကြာ ပွင့်တွေ ကိုလည်း
နေသာ ခွင့် ပေး လိုက် ပြီး
အ ဆိပ် နဲ့ မိတ် ဖွဲ့
အိမ်မက် တွေ ကိုလည်း
ဘိလပ်ရည် တိုက်ခဲ့ ပြီ
လွတ်လပ်ရေး ကဗျာ အတွက်
မြေ တကွက် ထွန်းယက် ခဲ့ ပြီး ပြီ။
ပြည်သူက ရိုသေကိုင်းရှိုင်းရတဲ့ သံဃာတော်မြတ်အပေါင်းကို ဖိနှိပ်ချူပ်ချယ်ကန့် သတ်ထားတဲ့ နအဖအာဏာရူးတို့ ရဲ့ ပုံသဏ္ဍန်ကို သရုပ်ဖေါ်ရေးဆွဲထားသော ကာတွန်း။
ဆရာတော်တို့နိုင်ငံမှာ သူတို့ရဲ့ဝမ်းစာ -
တစ်ခွက်တာကို တစ်ဝက်လှူနေတဲ့ -
ဆင်းရဲသားပြည်သူ အနာဂတ်ပညာရေး -
ရင်လေးစရာကောင်းတဲ့ အသိဥာဏ်မကြွယ် -
ကလေးသူငယ်တွေ ဗုဒ္ဓစာပေမပေါက် -
အတန်းစာလည်း မမြောက် သင်ကြားနေစား -
ကျောင်းသားများနဲ့ မိဘမဲ့ဆင်းရဲသား -
ခိုနားစရာ ရှားတဲ့ လူတွေများပြား စောင့်စားနေတယ်။
ကျောင်းသားတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာ ပညာရေးနိမ့်ကျ -
စနစ်တကျ မရှိလှတဲ့ ကျောင်းသင်ခန်းစာ -
မရေမရာနဲ့ စာမေးပွဲနီး -
ခိုးချပြီးအောင် လုပ်ထားတဲ့စနစ် -
နားလည်သင့်ပြီ ကမ္ဘာ့ကျောင်းသား -
ထိုသူများနဲ့ ပညာအရာယှဉ် -
နှိုင်းဆကြည့်ရင် ကွန်ပျူတာတစ်လုံး -
လုံးလုံးမှ မမြင်ဖူးတဲ့ ကျောင်းသားတို့ရဲ့ မမျှတတဲ့ ဘ၀ပါ။
ရဲဘော်တို့ - ရဲဘော်တို့နိုင်ငံမှာ ကောက်ကျစ်တဲ့စနစ် -
ဗလပျစ်နဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့မိဘ - မောင်နှမပြည်သူ
မျိုးချစ်လူထုနဲ့ သွေးခွဲရန်တိုက် -
စည်းစိမ်ခိုက်နေတဲ့ ပြည်သူတို့ရဲ့ရတနာ -
ကုဋေကုဋာကို မတရားရယူ -
အပေးအယူအနေနဲ့ ကျွန်စာတမျှ -
ပေးနေကြတဲ့ အာဏာရှင်တစ်စုကို ဆန့်ကျင်ပါ။
နိုင်ငံရေးဆိုတာ ဆွမ်းဒကာ ဆွမ်းအမ အရေးပါ၊
ပညာရေးဆိုတာ သင်တို့ရဲ့ အနာဂတ်ဘ၀ အရေးပါ၊
စစ်သားဆိုတာ အာဏာရှင်တို့ရဲ့ လက်ပါးစေ မဖြစ်သင့်ပါ၊
ဒီသုံးချက်ကို ဦးထိပ်ရွက်မယ်ဆိုရင် တို့များရဲ့မိဘ မောင်နှမနဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်း ညီအစ်ကိုရင်းများ နောင်တခေတ် မြန်ပြည်ဟာ ကမ္ဘာ့ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ပြီဗျာ။
ရွှေဝါရောင် သံဃာ-ကျောင်သား-လူထု ပူပေါင်းလှုပ်ရှားမှု့ အဖွဲ့ (Saffron Monks-Students-People Alliance) (SMSPA)၊
ရွှေဝါရောင်သောတုဇနဘိက္ခူ သံဃာ့အဖွဲ့ ကြီး (Saffron Young Monks Organization) (SYMO)၊
လွတ်လပ်သောစာပေနှင့်အနုပညာအဖွဲ့ (Free Literature and Art Organization) (FLAO) တို့ 
Voice 6-10.Pmd E-Book (Final) Supplement
ပေးပို့ ပေးသော ကိုလူချော အားကျေးဇူးတင်ပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Sunday, January 10, 2010 Links to this post
နအဖရဲ့အတုအယောင် အလိမ်အညာကောက်ကျစ်ဟန်ဆောင်လှည့်ဖြားမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဒီလိုပါတဲ့။
(တင်ဆက်ဖျော်ဖြေပေးသော သီးလေးသီး ဆေးရောင်စုံအငြိမ့်အဖွဲ့ အား အထူးဂုဏ်ယူလေးစားရပါ
ကြောင်းနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံအားလည်း စီစဉ်ဖေါ်ပြပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.)။
ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံ တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူတွေကို
ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံ တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူတွေကို မမေ့ကြပါနဲ့ ။ မမေ့ရုံတင်မက တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အာဏာရှင် လက်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့ ဆိုတာ သူတို့ တင်မှမဟုတ် အသင်တို့
မှာလည်း အမျိုးသားရေးအဖြစ် တာဝန်ဝတ္တရားရှိပါတယ်။
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး အာဏာရှင်လက်အောက်မှ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် စွန့်လွတ်အနစ်နာခံပြီး
ရဲဝန့်စွာ ယုံကြည်ချက်အပြည့်ဖြင့် လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံရသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအပေါင်းအား ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
တိုင်းသူပြည်သားအပေါင်းအားလည်း အထူးမေတ္တာရပ်ခံတောင်းပန်လိုတာကတော့ မိမိတို့အားလုံး
အတွက် အာဏာရှင်တို့ ရဲ့ကြမ်းကြုတ်ရက်စက်လှသော ထောင်များအတွင်းမှာ အနစ်နာခံ
စွန့် လွှတ်လျက်ရှိကြသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ကျောင်းသားပြည်သူ ရဟန်းရှင်လူအပေါင်းတို့
ရဲ့ လေးစားဖွယ်ကောင်းသော ဆောင်ရွက်ချက်များကို မမေ့သင့်ကြဖူးဆိုရင်တော့ အာဏာရှင်
နအဖကို မိမိတို့ တတ်နိုင်သည့်ဘက်များမှ ကန့်ကွက်ဆန့် ကျင်ပေးကြဖို့လှိုက်လှဲစွာ မေတ္တာ
အာဏာရှင် နအဖရဲ့ထောင်တွင်းမှာ အသင်တို့ ရဲ့ရဟန်းသံဃာတွေ သားသမီးရင်သွေး ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ပြည်သူတွေ စက္ကန့် နဲ့ အမျှ မိနစ်ပိုင်းနဲ့ အမျှ အာဏာရှင်ရဲ့ရက်စက်မှုကို ဒူးမထောက် လက်မမြောက်ဘဲ ရဲရဲဝန့်ဝန့် ကြံ့ ကြံ့ ခိုင်ခိုင် တော်လှန်တိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိတယ်ဆိုတာ အသင်တို့ ကို အသိပေးလိုပါတယ်။
တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် အနစ်နာခံ စွန်လွှတ်ရဲတဲ့၊ ရဲ့ ဝန့်ပြောင်မြောက်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့လုပ်ရဲတဲ့သူတို့ ဟာလည်း သင်တို့ လိုဘဲ ပြည်သူထဲက ပြည်သူများပါဘဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး မျှော်မှန်းတဲ့ အနာဂတ် လှပသာယာဖို့ ဆိုတာ အမိမြန်မာပြည်မှာ အာဏာရှင်များ လုံးဝဥဿုန် မရှိမှ ဖြစ်မှာပါ။
ပြည်သူအားလုံး ဒီနေ့ စုပေါင်း တော်လှန်၊ ဒီနေ့ အာဏာရှင် အမြန် ပြုတ်ကျစေရမယ်။
(ပြည်သူများအတွက် ရင်တွင်းခံစားချက် အပြည့်အ၀ဖြင့် တင်ဆက်ဖျော်ဖြေပေးသော သီးလေးသီး ဆေးရောင်စုံအငြိမ့်အဖွဲ့ အား အထူးဂုဏ်ယူလေးစားရပါကြောင်းနဲ့ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ
အားလည်း စီစဉ်ဖေါ်ပြပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်)။
မျှဝေ ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်း အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
၂၀၁၀ ဇန်န၀ါရီ ၁၅ ရက်နေ့ တွင် နေကြတ် မည်.။
(၂၂-၇-၂၀၀၉ နေကြတ်ရက် သည် ကရကဋ် ရာသီ ၌ ဖြစ်သည်။)နေ၊ လကြတ်ခြင်းသည် မကာရ
ရာသီ၌ ကျရောက်လျှင် ဝန်ကြီးများ နှင့် သူတို့၏ မိသားစုများ၊ ထို့အပြင် အိမ်တွင်းအမှုလုပ်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ နှင့် လူသတ်လက်နက် ကိုင်ဆောင်သူများ ပျက်စီးမည်၊ ဖျက်ဆီးခြင်း ခံရမည်။ (၁၅-၁-၂၀၁၀ နေကြတ်ရက်သည် မကရ ရာသီ၌ ဖြစ်သည်။)
နွေ အခါတွင် မီးဘေး ဂရုပြုပါ ။ မီးလောင်ခဲ့ပါကယမန်နှစ်ထက်ပိုမိုကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်အံ့။
နိုင်ငံတကာ၏ ဖိအားများ အတွေးသစ် ၊ အမြင်သစ်များ ဖြင့် ဆန်းသစ်လာအံ့ ။ နယ်ခြားဒေသများတွင်
စစ်မက် အင်္ဂါရပ်များ ကြီးထွားအံ့ ၊ ပြဿနာများ ပိုမို ရှုပ်ထွေးလာအံ့။ သာသနာ့ဝန်ထမ်းများ နှင့် အစိုးရ၀န်ထမ်းများ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်လည် ဆုံတွေ့ ရအံ့ ။ အကြီးအကဲ အထက်ပိုင်းများကြားတွင် မကြေလည်မှုများ တိုးပွားလာအံ့ ။ မင်းစိုးရာဇာ မိသားစု အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် နာရေးကြုံရအံ့။ နေကြတ်
ပြီး ၉လ အတွင်း နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ သို့ မဟုတ် ကြင်ယာတော် ကျန်းမာရေးကြောင့် ခွဲစိတ်ခံကိန်း ရှိလာနိုင်အံ့ ။ ၂၀၁၀ တွင် ပြုလုပ်မည့် အမှုကိစ္စများ လမ်းညွှန်ပေးမည့်သူ ကင်းမဲ့ခြင်းကြောင့် ဝေ့လည်ကြောင်ပတ် ဖြစ်အံ့။ကမ္ဘာ့နက္ခတပညာရှင်ခန့်မှန်းကြပါသည်
နေကြတ် နေပုံ ကိုဤသို့ ကြည့်ပါကမျက်စိ ထိခိုက်မှုအား သက်သာပါသည်.။
မြဝတီ နယ်စပ် က မြန်မာအကောက်ခွန်ဝန်ထမ်းများရဲ့ပေါ်ပေ...
ဒီနေ့လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နအဖဆ...
မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ တွေ့ မြင်ခဲ့ရသေ...
ယနေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ရုံး တွင် လူထု ...
ဒီ မြန်မာ့တပ်မတော်သမိုင်းကို တပ်မတော်သားတွေလက်ထဲရေ...
ယနေ့ နေ့စွဲဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟို...
နေကြတ်တာ အကြာဆုံး သုံးနာရီကျော်ခန့်နေကြတ်တာကိုြ...
သန်လျှင်မြို့ရဲ့ ဂုဏ်ကျက်သရေကို ညှိုးနွမ်းစေအောင်ြ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ချုပ်ဝင် မချို၊...
ယနေ့အချိန်ထိ မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းထောင် တွင်းအကျဉ်းက...
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း၌ နအဖ ဆန့်ကျင်သော လှုပ်ရှားမှု...
တိုင်းမှူးအမိန့်ဖြင့် နွေစပါးစိုက်ပျိုးနေရပြီး မစိ...
DVB တေးသံရှင်များ ၂၀၁၀ နှစ်သစ် မှာ နှုတ်ခွန်းဆက် တင...
လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များ ပါဝင် ပတ်သက်၍ ဓါးပြတိုက်မှု...
မူဆယ်မြို့တွင် အမှုလိုက် ရှေ့နေ ဌားရမ်းခ ကျပ်သိန်း...
နေကြာပန်းနဲ့မြန်မာပြည်သူ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင...
မတရား အဖမ်းဆီးခံ မွန်ရဟန်းပျို တပါးအား ရန်ကုန်မြို...
ပြည်သူက ရိုသေကိုင်းရှိုင်းရတဲ့ သံဃာတော်မြတ်အပေါင်း...
နအဖရဲ့အတုအယောင် အလိမ်အညာကောက်ကျစ်ဟန်ဆောင်လှည့်ဖြ...